Salama daholo! Androany izahay eto miaraka amin'ny fampiharana iray izay hanampy anao tsy ho hitan'ny hafa amin'ny WhatsApp ary antsoina hoe Ninja WhatsApp Apk ity fampiharana ity. Amin'izao andro izao dia tena zava-dehibe ho antsika rehetra ny fotoana ary tsy azo atao ny miresaka amin'ny olona rehetra. Manolotra vahaolana amin'ny olanao rehetra ity Apk ity.
Ninja En WhatsApp no ​​safidy tsara indrindra ho an'ny olona sahirana amin'ny asa ary tsy afaka mamaly lahatsoratra hafa noho izany. Sarotra be ny tsy miraharaha olona iray ao amin'ny WhatsApp satria ny olon-kafa dia afaka mahita ny asanao farany amin'ny lahatsorany. Na dia tsy miraharaha olona iray aza ianao ka mahita izany, dia tena tsy etika mihitsy ny misoroka olona iray fanahy iniana ary mahatsiaro ho menatra koa ianao.
Araka ny tokony ho fantatrareo rehetra fa raha mandefa hafatra amina olona amin'ny WhatsApp ianao, dia omen'ny ticks ny otra. Voalohany, hahita marikivy tokana ianao izay midika fa efa nalefa ny hafatra fa mbola tsy namaky azy ilay olona iray hafa. Avy eo ianao dia hahita marika marobe amin'ny loko manga ary midika izany fa efa namaky ny hafatrao ilay olona. Amin'ny fampiasana an'ity app ity dia afaka mamaky hafatra ianao nefa tsy misy mahalala.
Holazainay izao ny fomba fampiasana ny fampiharana satria mety ho sarotra ho an'ny mpampiasa maro izany. Rehefa manomboka ny fampiharana ianao dia hangataka anao hanome alalana amin'ny famakiana fampandrenesana. Tena zava-dehibe ny fahazoanao alalana satria raha tsy misy izany dia tsy handaitra izany. vantany vao nanome alalana ianao, dia ho afaka hiditra ao amin'ilay app ianao ary hampiasa azy io. Ny endrik'ilay fampiharana dia mitovy amin'ny fampiharana WhatsApp ofisialy ary mora aminao ny manantona azy.
Ny Ninja WhatsApp App dia manolotra anao safidy incognito ary amin'ny alàlan'ny fampandehanana azy dia ho lasa tsy ho hitan'ny fifandraisana rehetra ao amin'ny lisitrao ianao. Ny hafatra rehetra alefany aminao na hafatra an-tsoratra, Audio, Video, na rakitra hafa azonao vakiana tsy misy tabataba izany otra izany ary tsy ho azon'ny mpandefa akory ny hetsika ataonao. ny Mod App esorina tsotra izao ny safidy vakiana tick manga.
Tombontsoa lehibe ho an'ny olona tsy manam-potoana hamaly ny hafatra rehetra azony izany ary tsy te hanaja ny havany amin'ny tsy firaharahany ny hafany.
Endri-javatra lehibe an'ny Ninja WhatsApp Apk
Fandaminana tsotra sy azo ekena.
anarana WhatsApp Ninja
Anaran'ny fonosana com.noline.whatsapp
Tsy izahay no mpamorona ofisialy amin'ity fampiharana ity. Ity dia fampiharana an'ny antoko fahatelo ary manome rohy sy rohy azo antoka ho an'ireo mpampiasa anay izahay hisintonana ny Apk. Ity dia fampiharana azo antoka hampiasaina satria mifehy ny fikirakirana ny fampiharana ianao. Ity dia azo antsoina hoe mod ho an'ny WhatsApp izay manampy anao amin'ny fitsimbinana ny fotoanao amin'ny fitazonana anao tsy ho hitan'ny hafa.
Ahoana ny fampidinana ny Ninja WhatsApp Apk?
Ity dia fampiharana an'ny antoko fahatelo araka ny voalazanay ary mazava ho azy fa tsy hita ao amin'ny Google Apps Store ofisialy. Azonao atao ny misintona ny Apk anao amin'ny rohy nomena eo an-tampony sy ambany amin'ny lahatsoratra. Hanomboka ho azy ny fampidinanao amin'ny tsindry tokana amin'ny bokotra fampidinana. Mila manam-paharetana mandritra ny segondra vitsivitsy ianao aorian'ny fipihana indray mandeha amin'ny bokotra satria matetika dia mila fotoana be ny fanomanana ny rakitra.
Ahoana no hametrahana Ninja WhatsApp Apk?
Tokony hanaraka ireto dingana ireto ianao amin'ny fametrahana ny Apk:
Andraso mandra-pahatapitry ny fametrahana azy ary kitiho ny bokotra Vita na Sokafy.
Sintomy ary apetraho izao ny App ho lasa tsy hitan'ny rehetra ny fifandraisana anao nefa tsy tsikaritr'izy ireo akory. Tsy misy henatra intsony noho ny tsy firaharahana olona.
Raha mila fampiharana bebe kokoa toa ity dia tsidiho ny anay Website.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Mod App, WhatsApp Ninja, Ninja WhatsApp Apk, Ninja WhatsApp App Post Fikarohana
PLDT WiFi Hacker Apk Download Ho an'ny Android 